Nezvedu | SUNSUM HOUSEHOLD CO., LTD
Sunsum mhuri Co., Ltd.iri muna Ningbo City, Zhejiang Province, rinova rinokosha chengarava guta pamhenderekedzo yokumaodzanyemba kwakadziva China. Iyo yenguva refu yekutengeserana tsika yekune dzimwe nyika uye mukana wekuve padyo nekudzika-mvura chiteshi chakagadzira Ningbo guta rine simba rekutengeserana kune dzimwe nyika uye yakaunza makambani emakambani ekutengeserana epasirese senge kambani yedu.
Kambani yedu yakave yakasarudzika mumhando dzekutengesa epurasitiki - simbi uye silicone zvigadzirwa zvemumba uye zvekusimudzira zvipo mumusika wepasirese anopfuura makore gumi. Hedu makuru zvigadzirwa zvinosanganisira imba ware & yekunwa ware akateedzana.
Yedu yemubatanidzwa fekitori yakaongororwa neDisney, NBCU, AVON, Sedex, BSCI. Nekuongorora kwakadai kwakakodzera, isu takashanda pamwe nemhando zhinji dzerezinesi, seDisney, Minions, Mattel, DC, Marvel, Paw Patrol. Uye zvakare kutumira zvinhu zvakawanda kuchitoro chikuru seTesco, Coles.
Tine nyanzvi QC timu, yakaoma kuongororwa maitiro, uye chengetedza kubatana kwepedyo nehunyanzvi hwekuongorora vamiririri uye ejensi dzekuyedza kupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Tine simba rakasimba reOEM & ODM, iyo yekupedzisira kumeso, logo kudhinda uye kuputira kunogona kuvezwa. Iyo fomu inogona kugadziriswa zvinoenderana nesampuli uye vanodhirowa zvinopihwa nevatengi.
Tine makore anopfuura gumi echiitiko cheindasitiri uye yakasimba yekudyidzana cheni yekubatanidza kugona, inogona kukurumidza kupindura kune izvo zvinodiwa uye nekupa masevhisi emhando yepamusoro.
Isu tinozvirumbidza pamhando dzakasiyana siyana dzezvigadzirwa nemitengo yemakwikwi nehunhu hwakanaka, nekukurumidza kupindura, nekukurumidza kutumira nguva uye nebasa rakanaka Kushanda nesu, iwe uchanzwa hunyanzvi uye hwepamusoro basa reboka redu rinoshanda. Isu tinopa kuita kuti rako bhizinesi rive nyore kune iyo yakawanda purofiti.